အောက်ပိုင်းအလှတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘီကီနီလေးနဲ့ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုလေ – FB Daily News
အောက်ပိုင်းအလှတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘီကီနီလေးနဲ့ အမိုက်စား ကပြထားတဲ့ မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုလေ
အောက်ပိုင်းအလှတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ ဘီကီနီလေးနဲ့ အမိုက်စား ကပြကပြထား မျက်ဝန်းရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယိုလေး
မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မြ ကာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာ မည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတ ယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။
ပုံေ လးတွေ တိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို “ပါးကွက်လေးပါ ပျက်သွားတဲ့ထိတရှိုက်မက်မက် နမ်းမယ့်သူ ???
” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မာ်ဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်တယ်နော်။Myat Won
ေအာက္ပိုင္းအလွေတြေပၚလြင္ေစတဲ့ ဘီကီနီေလးနဲ႔ အမိုက္စား ကျပထားတဲ့ မ်က္ဝန္းရဲ႕ အမိုက္စားဗီဒီယိုေလး
ေမာ္ဒယ္လ္ေလာကကိုဝင္ေရာက္တာ ျမ ကာေသးပင္မဲ့ ပရိသတ္အမ်ားအျပားရဲ႕အားေပးဝန္းရံမႈကို တျဖည္းျဖည္းရရွိလာတဲ့ ေမာ္ဒယ္ျဖစ္ပါတယ္ ေယာက်ာ္းေလး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ဝန္းရံအားေပးမႈရရွိထားတဲ့သူမကေတာ့ social media ေလာကမွာ နာ မည္တစ္လုံးနဲ႔ ရပ္တည္ေနသူ တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ပုံေ လးေတြ တိုင္း မွာ ေမာ္ဒယ္မ်က္ဝန္း တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ လန္းလြန္းေနတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။သူမကေတာ့ ခပ္ေခ်ခ်႐ိုက္ထားတဲ့ ပုံေလးကို “ပါးကြက္ေလးပါ ပ်က္သြားတဲ့ထိတရႈိက္မက္မက္ နမ္းမယ့္သူ ???
” caption ေလးတဲ့ တင္ေပးလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္၊၊ မာ္ဒယ္မ်က္ဝန္းရဲ႕ အလွပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ေတြ အတြက္ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္တယ္ေနာ္။Myat Won
ICU/HDU ဧရာဝတီစင်တာသို့ ဝန်ကြီးချုပ် လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေ
ငါ့ကိုတော့ ကြည့်ပြီးမပီးနဲ့’ ဆိုပြီး အိပ်ယာပေါ်မှာ လျံထွက်နေတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး
လုံးကိတ်နေတဲ့ ရင်သားအလှတွေအရှင်းသားမြင်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်
ရေချိုးဇလုံထဲ အလန်းစားရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် စတယ်လာ